Akụkọ - Yiri mkpuchi ihu ọgwụ ma ọ bụrụ na onye ezinụlọ gị anaghị ekewapụ onwe ya iche, ka WHO na-ekwu
Yiri ihe mkpuchi ihu ma ọ bụrụ na onye ezinụlọ gị anaghị ekewapụ onwe ya iche, ka WHO na-ekwu
Ndị niile so n’ezinaụlọ kwesịrị itinye mkpuchi ihuọgwụ ma ọ bụrụ na mmadụ na-anọrọ onwe ya n’ụlọ ma ghara ịnọrọ naanị ya n’ime ụlọ, dịka totù Ahụ Ike Worldwa (WHO) si kwuo.
Dị ka o kwesịrị, ọ bụrụ na ịchọrọ iche, ị ga-ekewapụ onwe gị n'ọnụ ụlọ nke gị na ime ụlọ ịwụ nke aka ya, onye ọrụ WHO bụ Maria Van Kerkhove kwuru n'oge a na-aza ajụjụ na azịza na Tọzdee.
Agbanyeghị ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịme ya, ị kwesịrị “gbalịsie ike ka ị ghara ịnọ ndị ezinụlọ gị nso. Gbaa mbọ hụ na n'ime ezinụlọ ị na-eyiri ihe mkpuchi, n'ọnọdụ a yikwasị ihe mkpuchi ahụike, ma ọ bụrụ na ịnwere ike ịnweta ha. Ọ bụrụ na ọ bụghị, yikwasị ihe nkpuchi, ”Van Kerkhove kwuru.
Ọ gbakwụnyere, "Jide n'aka na ị na-ehicha aka gị ma na-akwọ aka gị mgbe niile, na ị na-ekpochapu ihu, hụ na ị nwetara ọtụtụ nri na ọtụtụ ezumike na ọtụtụ mmiri na ihe ndị ọzọ," ka ọ gbakwụnyere.
Ejila ihe nkpuchi mee ihe dị mkpa na ọgụ zuru ụwa ọnụ megide ọrịa COVID-19, mana ha enweghị ike imeri nje ahụ n'onwe ha, dọrọ WHO WHO Michael Ryan aka, bụ onye sonyere na nnọkọ ahụ.
Ryan gbara ndị mmadụ ume ka ha nọgide na-agbaso usoro mmekọrịta mmadụ na ibe ya, n'agbanyeghị ma ha na-ekpuchi ihu ma ọ bụ na ọ bụghị.
“Ọ ga-emebi nzube nke [ikpuchi ihe mkpuchi ihu] ma ọ bụrụ na ị mechie ebe dị anya. Na m nwere [ahụmahụ] nnọọ na nso nso - onye yi a nkpuchi… bịara ka m makụọ m wee sị, 'mba' na ha kwuru 'ma m na-eyi a nkpuchi.' Echere m, 'ee, mana ọ pụtara na anyị enweghị ike ịmakụ,' dịka m gaara enwe mmasị ịmakụ, "ka o kwuru.
“Ya mere nkpuchi ahụ na-enye gị nchekwa ahụ ọzọ, mana ọ gaghị enye gị ikike mgbe ahụ iji kpochapụ nsogbu ndị ọzọ niile. Ntucha aka na ihe nkpuchi dị mkpa n'ụzọ pụrụ iche, "ka o kwuru, na-agbakwụnye na ndị mmadụ na-emetụ ihu ha na ihu mgbe niile ma ọ bụrụ na ha na-ekpuchi ihu, ya mere, ị kwesịrị icheta ịsa aka ha na iji sanitizer mgbe niile.
Post oge: Jan-11-2021